Tun Tun's Photo Diary: Pindaya Cave #4
ဘုရားဖူးတွေ အဲဒီ ကျောက်စက်ပန်းဆွဲပေါ်က ကျနေတဲ့ေ၇နဲ.သူတို. ခေါင်းပေါ် ပုတ်နေကျတာ။ ကိုယ်တိုင် ပုတ်ခဲ့လားတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။
လိူဏ်ဂူအပြင်ထွက်လာတော့ အပြင်မှာ အလှူလုပ်နေတာ၇ှိတယ်။ ကြာဇံဟင်းခါး တိုက်နေတာပါ။
ပင်းတယက ညောင်ရွေကနေဆို၇င် ကားနဲ. ၂နာ၇ီလောက် မောင်းရတယ်။ အဝေးကြီး တကူးတက ကိုလာရတယ်လို.ပြောလို.ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်က ၇ူးခင်းနဲ. ထူခြားတဲ့ လိူဏ်ဂူ ကြောင့် လာရတာ တန်တယ်လို.ထင်ပါတယ်။ တချို.တွေ လဲ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ နဲ. ညောင်ရွေ ၊ ကလော ကနေ လာကြတယ်။
at 2/10/2014 10:48:00 PM